Nvidia Geforce RTX 3060 Ti - Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba izany - Pc
Nvidia Geforce RTX 3060 Ti - Nanazava ny zava-drehetra
Zon'ny tsirairay ny mankafy filalaovana mavitrika. Saingy mila ny fanohanan'ny fitaovana goavambe izany. Mba hanoherana izany dia nanangana Geforce RTX 3060 Ti i Nvidia. Izy io dia fanampim-panazavana farany an'ny laharam-pahamehana an'ny GPU ambanin'ny andiany 3000.Ny ankamaroan'ny mpilalao matihanina dia efa lasa gaga amin'ity vokatra ity noho ny fampiasa chipset mahavariana sy ny benchmark. Saingy ho fanatsarana mendrika ve izany raha manana andiany 2000 na maodely andiany 3000 taloha ianao?
Azo antoka fa tonga ny fotoana hahitana an'io.Raha tsy mandalo famerenana feno momba ny Geforce RTX 3060 Ti ary mampitaha azy amin'ny hafa dia mety ho zavatra sarotra ny milaza azy.
Nvidia Geforce RTX 3060 Ti famerenana:
Ity fitaovana vaovao avy any Nvidia ity dia natsangana mba hiatrehana olana maro. Nihorakoraka be ny fitaovana filalaovana teti-bola avo lenta. Mazava ho azy fa miaraka amina vokatra izay ambany 400 $, Geforce RTX 3060 Ti no safidy lehibe indrindra raisiny.
Tonga hanohana, ity fitaovana ity dia mandeha tsara amin'ny lalao 4K sy amin'ny lalao 1080p. Mahagaga ny fanamboarana chipset ary afaka manome fifaninanana henjana amin'ny ankamaroan'ny fitaovana fampiasa amin'ny lalao avo lenta izay hita eny an-tsena ankehitriny.
Ankoatr'izay, ity vokatra ity dia misy cores GPU marobe miaraka amin'ny habaka malalaka ao anatiny. Na dia maharitra ela aza ianao amin'ny fikirakirana an'ity fikirakirana ity dia tokony hanohana ny zavatra takinao izy io.
Iza amin'ireo no tsara indrindra? RTX 2080 vs GTX 1080 - Fampitahana amin'ny antsipiriany
CUDA Colours 4864
Colors Tensor Taranaka faha-3
Fanapahan-kevitra nomerika 7680 × 4320
Temperature GPU farafaharatsiny 93 C
Endri-javatra avy amin'ny Geforce RTX 3060 Ti:
Ny fikirakirana anatiny an'ny RTX 3060 Ti no tokony hotandremana. Mazava fa amin'ity teti-bola ity, ny fanananao GPU avo lenta no hany azonao angatahina ary ny 3060 Ti dia manolotra anao amin'izany. Tonga amin'ny famokarana chipset, ity fitaovana ity dia natsangana niaraka tamin'ny fahatsiarovana GDDR6.
Izy io dia tohanan'ny habaka 8GB izay matetika hita amin'ny maodely avo lenta hafa. Fampisehoana mahaliana iray hafa ny fiarahan'ny microprocessors SM izay afaka mihazakazaka mora foana amin'ny 38 Ampere. Na izany aza, ny fahasamihafana lehibe ananan'ny RTX 3060 Ti dia ny 128 CUDA cores fa tsy 64 fotsiny amin'ireo maodely teo aloha. Raha ny marina dia azonao atao ny milaza fa ny RTX 3060 Ti dia kinova nohavaozina.
Ity vokatra avy any Nvidia ity dia manana core 6464 CUDA ao amin'ny RTX 3060 Ti. Tonga amin'ny fanjifana herinaratra, maodely taloha dia nihazakazaka tamin'ny 175 Wattage. Na izany aza, misy bebe kokoa ny mari-pahaizana momba ny fitaovana amin'ity GPU ity ary manolotra manodidina ny 200 Watts izy io. Ho an'ny GPU lalao farany ambony, ny fanjifana herinaratra ambany toy ny 3060 Ti dia afaka manaporofo fa safidy tsara indrindra
Ankoatry ny cores CUDA tsotra, ny RTX 3060 Ti koa dia miaraka amina Cores Tensor marobe miaraka aminy. Miaraka amin'ny fanampian'ny tsipiriany toy izany, azonao atao ny manantena ny fetran'ny fotoana ambany sy ny fahombiazan'ny sary.
Fanamarihana:SM na Streaming Microprocessors dia miasa ho toy ny singa fototra amin'ny fanodinana sary ao anaty GPU. Rehefa milalao lalao ianao ary misy taratra maivana apetraka ao aminy dia lasa tompon'andraikitra amin'ny famindrana ity fampahalalana ity amin'ny fotokevitra RT ny SM. Vokatr'izany dia manomboka manisa bonus ary miverina miverina indray. Raha efa mazava dia afaka mamindra azy amin'ny sary mety izao ny SM.
2. Volavola sy nofo namboarina
RTX 3060 Ti dia mitazona ny endrika voalohany sy ny rafitra izay ny ankamaroan'ny mpikarakara GPU avy any Nvidia. Raha ny ara-drariny dia tsy misy fanovana lehibe eo amin'ny endrika ary misy fanavaozana kely fotsiny. Ity vokatra ity dia manana firafitra mitovy amin'ny RTX 3070.
Amin'ny lafiny rehetra, tonga miaraka amina volafotsy volafotsy izay hany fiovana. Mbola misy vombony mainty matte amin'ny andaniny roa noho ny filatsahan'ny hafanana. Fa ny fijery ankapobeny an'ny RTX 3060 Ti dia mahavariana. Mba hanatsarana ny endrika ivelany, ny 3060 Ti dia mitazona fomba fijery Titanium ary mitazona vatana lehibe miorina.
Ny volafotsy volafotsy vao namboarina dia toa mampanantena ary tonga avy hatrany amin'ny famaranana matihanina izy io. Na dia avelanao hivoaka mandritra ny fotoana fohy aza ity GPU ity, dia misy mpilalao matihanina matihanina rehetra te hametraka azy amin'ny endrika ivelany. Ny habeny sy ny endriny dia mifintina ary noho izany, ny fametrahana dia tsy ho olana velively amin'ity fitaovana ity.
Misy fahasamihafana kely ihany koa amin'ny sehatry ny famolavolana. Tsy toy ny GPU hafa avy any Nvidia, ity vokatra ity dia miaraka amina cooler axial-axial roa eo anilany. Ity dia manome endrika nentin-drazana vaovao ho an'ny fananganana iray manontolo. Noho io famolavolana io, ny RTX 3060 Ti dia mahatsapa fa milamina kokoa eo amin'ny natiora.
Izy io koa dia manana efitrano malalaka omena ao anatiny hitantanana ny heatsink. Vokatr'izany, ny GPU dia afaka mamoaka 4K ary koa vahaolana 8K. Ny heatsink dia afaka mihaona amin'ny PCB mora foana satria misy toerana malalaka malalaka.
3. Fampisehoana sy mari-pahaizana
Ny zava-bita dia mivoaka mba handray anjara lehibe rehefa mila mividy karatra sary manokana ianao. Izany no antony anaovana fitsapana sy fanaraha-maso mitohy amin'ny anaran'ny mpanamboatra hanavahana hoe iza no GPU tsara kokoa. RTX 3060 Ti dia misy valiny lehibe raha oharina amin'ireo maodely avo lenta.
Na mampitahanao azy amin'ny RTX 3070 na AMD RX 5700 XT, ity fitaovana ity dia mametraka fenitra sasantsasany izay mety hitondran'ny tsirairay fitsaboana. Vokatr'izany dia toa fividianana ambony ho an'ny olona rehetra izany.Tonga amin'ny fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana sy ny refy, RTX 3060 Ti dia manana isa 7306. RTX 3070 dia somary avo kokoa ary nahazo isa mitentina 8547. Etsy ankilany, ny RX 5700XT dia misy isa 6480.
Nandritra ny fampitahako ireo vokatra dia hitako fa ny RTX 3060 Ti dia misy fetra 21.3 amin'ny ankapobeny. Ity sisin-tany ity dia mendrika indrindra ho an'ny GPU mpilalao matihanina. Izy io koa dia mamafa ny 3DMark Ray Tracing miaraka amin'ny isa mahomby 25.6. Toy izany koa, AMD RX 5700 XT dia mianjera any aoriana miaraka amin'ny fetra 9.0. Ny fitsapana 3D koa dia ambany hatramin'ny 211.5 raha ampitahaina amin'ny RTX 3060 Ti.
Mba hampitahana an'ity GPU ity araka ny fampisehoana fitsapana maro dia naka fanapahan-kevitra roa samihafa aho. Ny fitsapana dia atao araky ny lalao marobe lalaovina amin'ny fanapahan-kevitra roa. Ny sasany amin'izy ireo dia Microsoft Flight Simulator, Shadow of the Tomb Raider, Death Stranding, Control, ary Assassin's Creed Valhalla.
Azonao atao ny manondro ny latabatra voalaza etsy ambany. Mazava fa ny RTX 3060 Ti dia tonga ho safidy lehibe hatao. Ho famaranana ity fitsapana ity dia misy marindrano marobe izay mila isaina mandritra ny fanatanterahana. Famaritana fototra miaraka amina processeur Core i9 sy RAM 32GB no tokony ho fotony.
Raha avela hangatsiaka ity fitaovana ity dia azonao atao koa ny manamboatra azy ireo miaraka amin'ny cooler Corsair.
Aloky ny mpanafika fasana 108fps 65fps
Fahafatesana maty 132fps 59fps
fanaraha-maso 54fps 45fps
Ka eto ianao dia mandeha miaraka amin'ireo valiny ireo ary mazava fa ny fampisehoana roa miaraka amin'ny 1440p sy ny 4K dia mitovy. Tsy dia misy fidirana firy rehefa mivadika ny DLSS. Ny tahan'ny frame dia midina amin'ny ampahany kely ary mety tsara raha ampiasaina amin'ny RTX 3060 Ti. Tamin'ny dingana iray, hitako fa nanome fitaovana 200 ho an'ny Assassin's Creed Valhalla ity fitaovana ity.
Mba ho ara-drariny, ity fampisehoana ity dia ahafahanao misafidy amin'ireo fomba sy lalao rehetra. Ny fanovana na ny famadihana ny vahaolana ambany dia ho hita fa mahasoa hatrany. Na milalao amin'ny vahaolana 1440p na4K ianao, Nvidia 3060 Ti dia misy fampisehoana tsy azo sitranina.
Ao amin'ny vahaolana 4K, afaka milalao lalao ambany 8fps izy io izay mahatonga ny raharaha rehetra amin'ny antsipiriany. Tianao ny mifamadika amin'ity lalao ity miaraka amin'ity foto-kevitra mahavariana ity amin'ny lalao sy ny valiny.
Mampitaha staty: RTX 3060Ti vs RT3070 vs RTX 2080
CUDA Colours 4864 588800,00% 400000%
Mampitombo ny famantaranandro (GHz) 1.6 170,00% 140%
fahafahana Slot 2 Slot 2 Slot 2
Herin'ny karatra sary (W) 200 22000,00% 20000%
Nvidia Geforce RTX 3060 Ti: Tombony sy fatiantoka
Mahafinaritra tokoa ity vokatra ity raha ampiasaina
Izy io dia miaraka amin'ny DLSS hanovana lalao maro
Afaka mahazo fanohanana lehibe ianao amin'ny lalao 1440p
Izy io dia miaraka amin'ny fampisehoana 4K mahafinaritra
Azonao atao ny mahazo fonony Corsair Crystal 570X ho fiarovana tsara
Izy io dia miaraka amin'ny fahatsiarovana 8GB
1Q. Afaka miasa ve ny feo RTX raha tsy misy karatra RTX?
taona:Raha tsy manana kara-peo RTX ianao dia tsy mila miahiahy mihitsy. Raha ny marina dia mandeha tsara io na dia tsy manana karatra RTX aza ianao. Na dia misy feo tsotra aza ny karatra RTX, azonao atao ny misintona ny mpamily amin'ny Internet. Ity dia tokony hiasa amin'ny GPU manokana izay mifanaraka amin'ity fitaovana ity.
2Q. Nvidia RTX tsara kokoa noho ny GTX?
taona:Ny GTX dia manamora ny modely avy amin'ny taranaka samihafa rehefa mampiasa karatra sary. Mazava ho azy fa tsy mitovy ny haavon'ny mari-pahaizana. Mba ho ara-drariny, ny andiana RTX an'ny GPU dia dikan-teny navaozina an'ny GTX. Ny vidin'ny modely toa ny RTX 3060 Ti dia avo lavitra noho ny an'ny andiany GTX. Na izany aza, raha mila endri-javatra mahafinaritra miaraka amin'ny dinamika filalaovana tsara kokoa ianao, ity dia mety ho safidy lehibe ho anao.
3Q. Hanamarina ny lalao ve ny fikirana 1080p?
taona:Hiankina tanteraka amin'ny zavatra tadiavinao sy ny fepetra mety ilainao izany. Ny maodelin'ny RTX sasany dia afaka manolotra fps ambany kokoa amin'ny famahana ny efijery avo kokoa. Raha miresaka momba ny 3060 Ti, manolotra 1080p, 1440 p ary koa ny vahaolana 4K. Amin'ireo telo ireo, ny 1080p no toerana farany ambany ary azo antoka fa hanamarina ny traikefanao amin'ny lalao izany. Azonao atao koa ny manamboatra fps video.
Nvidia Geforce RTX 3060 Ti - Mety amin'ny lalao ve izany?
Mba ho ara-drariny, Geforce RTX 3060 Ti dia fitaovana iray lehibe tokony hananana amin'ny PC-nao. Manamora ny filanao lalao amin'ny chipset mahatalanjona sy fampisehoana goavana.Na dia mamita fitsapana fampisehoana marobe amin'ny benchmarks sasany aza, ny Gamer rehetra matihanina dia maniry ny hanana ity fitaovana ity eny an-tanan'izy ireo noho ny teti-bola tsotra sy ny lalao mahomby.
Na izany aza, raha efa manana maodely andiany 3000 ianao dia mety tsy fanavaozana mivantana izany. Raha manana zavatra ambany noho ianao ianao izao dia mety hanaporofo fa safidy lehibe ny famindrana mankany amin'ny Geforce RTX 3060 Ti.
Geforce RTX 3060 Ti dia vokatra mahatalanjona ary mitazona ny fanajan'ireo mpanodina lalao avo lenta izy io. Tsy misy afaka mieritreritra fa ny Geforce RTX 3060 Ti dia havoaka miaraka amina $ 400 amin'ny vidiny voalohany.
Hatreto dia manome tahiry $ 100 mivantana ho an'ny modely ho an'ny taranaka mandimby izy. Tsy dia misy fanavaozana ny RTX 3070 koa. Ka ny fisafidianana ny Geforce RTX 3060 Ti dia mety ho safidy mendrika ho an'ny rehetra. Ny hafanana be loatra ity GPU ity dia tsy ho olana velively noho ny habaka malalaka ao anatiny.
Motherboard tsara indrindra ho an'ny Ryzen 5 3600
Inona no fantatrao momba Vanguard Movie
Nandroso i Santos tamin'ny fandraisana an'i Paulo Henrik Conso avy ao amin'ny Fluminense
hulu mivantana vs. tv youtube
ahoana no ahafahako mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra amin'ny Internet
youtube mp3 converter download maimaim-poana
mijery sarimihetsika amin'ny sinema an-tserasera maimaim-poana ary tsy misy alaina
tranokala mivantana mivantana maimaim-poana
kaody roblox izay mandeha